रबि लामिछानेको ग्यालेक्सी फोरकेमा रमेश प्रसाइले पनि कार्यक्रम चलाउने, अरु प्रस्तोता कोको छन् ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचाररबि लामिछानेको ग्यालेक्सी फोरकेमा रमेश प्रसाइले पनि कार्यक्रम चलाउने, अरु प्रस्तोता कोको छन् ?
रबि लामिछानेको ग्यालेक्सी फोरकेमा रमेश प्रसाइले पनि कार्यक्रम चलाउने, अरु प्रस्तोता कोको छन् ?
काठमाडौं । चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवि लामिछानेले नयाँ टेलिभिजन ‘ग्यालेक्सी टेलिभिजन फोर के’ ल्याउने घोषणा गरेका छन् । राजधानीको तारे होटल म्यारिअटमा उनले टेलिभिजन लन्च गरे ।पत्रकार सम्मेलनमा टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने लाइनअप पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा अभिनेता राजेश हमालले होस्ट गर्ने ‘को बन्छ करोडपति’ देखि दीपकराज गिरीको ‘क्राइम प्याट्रोल’ सम्म छन् ।सामाजिक अभियन्ता रमेश प्रसाइँले ‘लाल मोहर’ नामक टकसो चलाउने भएका छन् ।
लोकतन्त्रवादी कविको छवि बनाएका नवराज पराजुलीले ‘फरेभर’ नामक कार्यक्रम होस्ट गर्ने भएका छन् । ‘यो नरम र कोमल कार्यक्रम हो’ पराजुलीले भने, ‘संसारमा कोमलता बचाइराख्न यो कार्यक्रम ल्याउनुपरेको हो ।’लामिछाने स्वयमले चलाउने कार्यक्रमको नाम चाहिँ ‘सीधा कुरा’ हुने भएको छ । यसअघि न्यूज२४ मा ‘सीधा कुरा जनतासँग’ चलाएका उनले सोही नाम अनुसार ‘सीधा कुरा…’ चलाउने घोषणा गरे । सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार यसलाई चलाउने उनले जनाए ।जनताको मु’द्दालाई यही कार्यक्रमबाट निरन्तरता दिने लामिछानेले जनाए ।
साथै, नेताको खोजी गर्ने कार्यक्रम ‘द लिडर’ पनि प्रसारण गरिने भएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा अडिसन गरिने भनिएको कार्यक्रमबाट समाजमा सक्षम नेताहरु ज’न्माउने होस्ट लामिछानेले घोषणा गरे । यो कार्यक्रम प्रसारण हुन केही समय लाग्ने उनले जनाए ।यसबारे बैशाखपछि थप जानकारी गराइने भएको छ ।‘कामका कुरा’ कार्यक्रम पनि प्रसारण हुने भएको छ ।टेलिभिजन लन्च समारोहमा राजेश हमाल, नीर शाह, हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, केदार घिमिरे लगायतका सेलेव्रिटी पनि सहभागि थिए । उक्त प्रे’समिट कुनै स्टारहरुले भरिएको एउटा प्रिमियरजस्तो देखिएको थियो ।